सरकार पूर्णत: असफल भयो, अब जनगणतन्त्र चाहिन्छ : सिपी गजुरेल – Khabar Silo
२९ असोज, काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सिपी गजुरेलले वर्तमान सरकार पुर्णत असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाले नै दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वका अवसरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरको चियापान कार्यक्रममा पुगेका नेता गजुरेलले सरकार पूर्णत असफल भएको आरोप लगाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको अकांक्षा पूरा गर्दै समाजवादसम्म पुग्न जनगणतन्त्र चाहिने टिप्पणी गरे ।
‘सरकार पूर्णत: असफल भएको छ । चुनावमा गरेका बाचाहरु एउटा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । हामीले यो ब्यवस्था नै उचित छैन भन्दै आएका छौं’ सरकारको कामकारबाहीबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने ।
यो ब्यवस्था ठीक नभए कस्तो ब्यवस्था ठीक हुन्छ त ? भन्ने पत्रकारको पश्नमा नेता गजुरेल भन्छन्, ‘हामीले सुरुदेखि नै जनगणतन्त्र चाहिन्छ भन्दै आएका छौं । जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवादसम्म पुग्न जनगणतन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’
नेता गजुरेलले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘भ्रमण कति उपलब्धीपूर्ण भयो भन्नुभन्दा पनि त्यसक्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयनले सफलता र असफलतालाई मापन गर्ने हो’ उनले भने ।
देशभर कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च, काठमाडौँ उपत्यकामा अझ खतरा
काठमाडौँ, २२ साउन । बन्दाबन्दी खुलेपछि कोरोना सङ्क्रमितको दर अझ बढेको छ । बन्दाबन्दी अघिसम्म दैनिक सयभन्दा कम सङ्ख्यामा आइसकेकोे कोरोना सङ्क्रमण दर त्यसपछिको दिनमा निरन्तर माथि जाँदै छ । बन्दाबन्दी खुलेपश्चात् काठमाडौं उपत्यकामा सङ्क्रमित दर झनै बढेको छ । बुधबार मात्र काठमाडौँं उपत्यकामा ६२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका […]
काठमाडौं । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख नै बन्ने चाहना राखेकी छिन् । यौ’न दूरा’चारको आ’रोपमा कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । र, महरा प्रहरी हि’रा’सतमा छन् । सभामखु र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनु नहुने संवैधानिक प्रावधानका कारण सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर भए पनि सभामुख छाड्न […]